सेती अञ्चल अस्पतालमा हेमोडायलासिस सेवा सुरु | Nepali Health
सेती अञ्चल अस्पतालमा हेमोडायलासिस सेवा सुरु
२०७३ असोज १९ गते ८:५५ मा प्रकाशित
धनगढी, १९ असोज – सुदूरपश्चिमको सेती अञ्चल अस्पताल डायलसिस सेवा सुरु भएको छ । त्यस्तै एचआइभी भाइरल लोड र सिकलसेल एनिमिया उपचार सेवा समेत सेवा सुरु भएको छ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालय र मानव अङ्ग प्रत्यारोपण केन्द्र भक्तपुरको सहयोगमा यी सेवा सुरु गरिएको हो । हेमो—डायलसिस सेवा मिर्गौला उपचारसम्बन्धी सेवा हो ।
यस्तै एचआइभी भाइरल लोड सेवा एचआइभीको आधुनिक जाँच सेवा हो । सिकलसेल एनिमियाका विरामीका लागि उपचारका लागि सिकलसेल एनिमियाको उपचार सेवा सुरु गरिएको हो । यो रोग मध्ये तथा सुदुर पश्चिमका थारु जातीमा बढी मात्रामा देखिएको छ ।
अस्पतालले यी तीनवटै सेवाका लागि करिब रु तीन करोड ५० लाख मूल्य बराबरका अत्याधुनिक मेसिन उपकरणको व्यवस्था गरेको थियो ।
यसैबीच स्वास्थ्यको सुदूरपश्चिममाञ्चलको समिक्षा गोष्ठीमा भाग लिन धनगडी पुगेका स्वास्थ्य मन्त्री गगन थापाले अञ्चल अस्पतालमा थपिएको सेवाको शुभारम्भ गरे ।
सो अवसरमा मन्त्री थापाले स्वास्थ्य उपचारका लागि नागरिकले काठमाडौँ वा अन्यत्रै गएर उपचार गर्नु नपर्ने व्यवस्थाका लागि मन्त्रालयले प्रयास गरिरहेको बताए ।
बिरामीको उपचार गर्ने सवालमा अञ्चल अस्पताल मेरुदण्डका रुपमा रहेको भन्दै मन्त्री थापाले भने,“अस्पतालको परिसरमा बिरामी आइसकेपछि उसले उपचारका लागि बाहिर जानुपर्ने अवस्था आउनु हुँदैन । यो अस्पतालबाट त्यहि अपेक्षा गर्दछु ।
विसं २०४० मा अञ्चल अस्पताल बनेको १५० श्ययाको सेती अञ्चल अस्पतालमा पछिल्लो केही महिनादेखि आइसियु (सघन उपचार कक्ष) सेवासमेत सञ्चालनमा आएको छ । अस्पतालमा १९ जनाको दरबन्दी रहेकामा दरबन्दीअनुसारका चिकित्सक नभएको एवम् दक्ष चिकित्सकको अभाव रहेको कारण उपचार सेवा प्रभावकारी र गुणस्तरीय हुन सकिरहेको छैन । रासस
त्रिवि आइओएममा को बरिष्ठ ? कसलाई बनाउने डीन ?
चिनीले घटाउँछ तनाव, बनाउँछ रोमान्टिक